Sport Daily – The Best Sport News Daily
The Best Sport News Daily
လူငယျလေးတဈဦးရဲ့ မနျယူကြောနံပါတျ ၇ အိပျမကျ ဒီဂီယာကို ကြေးဇူးတငျစကားဆိုခဲ့တဲ့ Community of Madrid ဥက်ကဌ ဆာနေးအတှကျ ကစားသမား အလိုကျနဲ့ ပွောငျးရှကွေ့ေး ပေးခမြေယျ့ ဘိုငျယနျမွူးနဈ ခယျြလျဆီးမှာပဲ ဆကျနခေငျြတယျလို့ ပကျဒရို ဖှငျ့ဟ တောရကျဈလကျသဈ ဖာရနျတောရကျဈကို လီဗာပူးလျကိုစိတျဝငျစားနေ
လူငယျလေးတဈဦးရဲ့ မနျယူကြောနံပါတျ ၇ အိပျမကျ
7 days ago Emyrus
ဒီဂီယာကို ကြေးဇူးတငျစကားဆိုခဲ့တဲ့ Community of Madrid ဥက်ကဌ
ဆာနေးအတှကျ ကစားသမား အလိုကျနဲ့ ပွောငျးရှကွေ့ေး ပေးခမြေယျ့ ဘိုငျယနျမွူးနဈ
ခယျြလျဆီးမှာပဲ ဆကျနခေငျြတယျလို့ ပကျဒရို ဖှငျ့ဟ
တောရကျဈလကျသဈ ဖာရနျတောရကျဈကို လီဗာပူးလျကိုစိတျဝငျစားနေ
သတင်းတွေ အရတော့ ဆန်ချိုဟာ မန်ယူကို ပေါင် သန်း ၁၀၀ နဲ့ရောက်တော့မယ်တဲ့၊ နီးစပ်နေပြီဆိုကြတယ်။ ထားပါ၊ မနေ့တုန်းက သတင်းတွေမှာတော့ ဆန်ချိုကိုပေါင် သန်း ၁၂၀…
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက် ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဒီဂီယာကို Community of Madrid ရဲ့ ဥက္ကဌဖြစ်သူက ကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့ပါတယ်။ စပိန်နိုင်ငံမှာ ကူးစက်ခံရသူဦးရေက (၅၇ ၇၀၀)…
မန်စီးတီးအသင်း ရဲ့ တောင်ပံကစားသမား ဆာနေးကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ကို ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းအနေနဲ့ အသင်းရဲ့ ခံစစ်ကစားသမား အလာဘာ နဲ့ ပေါင်သန်း (၅၀) အသုံးပြုသွားမယ့် ပုံစံမှာရှိနေပါတယ်။ ဆာနေးကိုခေါ်ယူဖို့အတွက် ဘိုင်ယန်အသင်းက…
ချယ်လ်ဆီးအသင်းတောင်ပံကစားသမားပက်ဒရိုဟာ လန်ဒန်ကလပ်မှာပဲ ဆက်လက်ကစားချင်တယ်လို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ အသက်၃၂နှစ်အရွယ် စပိန်ကစားသမားဟာ ဇူလိုင် ၁ ရက်နေ့မှာ ချယ်လ်ဆီးနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပြီး အလွတ်ထွက်ခွာခွင့်လည်းရရှိမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကလပ်အသင်းဘက်ကတော့ ပက်ဒရိုကို…
လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ ဗလန်စီယာအသင်းရဲ့ကြယ်ပွင့်ကစားသမားဖာရန်တောရက်စ်ကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားနေကြောင်း သိရပါတယ်။ ဖာရန်တောရက်စ်ကတော့ ဖာနန်ဒိုတောရက်စ်လက်သစ်ကစားသမားလို့ နာမည်ကြီးနေသူဖြစ်ပြီး စပိန်ထိပ်သီးအသင်းတွေဖြစ်တဲ့ ရီးရဲလ်နဲ့ ဘာစီလိုနာတို့ကလည်း စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အသက် ၂၀အရွယ်သာရှိသေးတဲ့…
ယူနိုကျတကျတဈလတာအကောငျးဆုံးကစားသမားဆု ရခဲ့ပွနျတဲ့ ဖာနနျဒကျဈ
2 weeks ago Emyrus
ယူနိုက်တက်ကွင်းလယ်လူဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ဟာ မတ်လအတွက် ယူနိုက်တက်ရဲ့တစ်လတာအကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကို ရရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ စပို့တင်းလစ္စဘွန်းကနေ ယူနိုက်တက်ကို ဇန်န၀ါရီကမှ ယူရို ၅၅သန်းနဲ့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့ ဖာနန်ဒက်စ်ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်တစ်လတာအကောင်းဆုံးဆုကိုလည်း ရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်အတွက်…
အသငျးခေါငျးဆောငျသဈ ဘယျသူဖွဈသငျ့လဲ ရှေးခယျြခဲ့တဲ့ မနျစီးတီးပရိသတျမြား
မန်စီးတီးအသင်းနည်းပြဂွာဒီယိုလာကို အသင်းပရိသတ်တွေက ရာသီကုန်မှာ အသင်းခေါင်းဆောင်ဒေးဗစ်ဆေးလ်ဗားထွက်ခွာခဲ့ပြီးပါက အသင်းခေါင်းဆောင်သစ်အဖြစ် ကီဗင်ဒီဘရိုင်းဖြစ်သင့်တယ်လို့ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ အသင်းမှာ ဆယ်နှစ်ကြာကစားခဲ့တဲ့ ဆေးလ်ဗားဟာ ရာသီကုန်မှာထွက်ခွာတော့မှာဖြစ်ပြီး စပိန် နဲ့ မေဂျာလိဂ်ကို သွားရောက်ကစားဖွယ်ရှိနေပါတယ်။…
ပှဲစဉျကငျြးပမယျ့ရကျ ထပျမံရှဆေို့ငျးခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စကြောင့် ရပ်နားထားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပြိုင်ပွဲကိုတော့ ကျင်းပမယ့်ရက်ကို ထပ်မံရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပြီလို့ ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ ပထမက ပြိုင်ပွဲကို ဧပြီလ (၃) ရက်နေ့မှာ ပြန်လည်စတင်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပြီး ဒီနေ့ထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာတော့…
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈတိုကျဖကျြရေးအတှကျ ရနျပုံငှရှောနတေဲ့ ဇလာတနျ
အေစီမီလန်အသင်းတိုက်စစ်မှူးဇလာတန်အီဘရာဟီမိုဗစ်ဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ယူရိုတစ်သိန်းလှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အီတလီမှာ ကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်မားနေပြီး စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေရှိနေချိန်မှာ ဇာလတန်က အွန်လိုင်းကတဆင့် ရန်ပုံငွေရှာဖွေဖို့ ယူရိုငါးသောင်းမတည်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် သူ့ရဲ့ လှူဒါန်းမှုနဲ့အတူ အားလုံးပါဝင်ဖို့အတွက်…
ကလပျအသငျးမှာ အောငျမွငျပမေယျ့ လကျရှေးစငျအသငျးမှာ ကရြှုံးခဲ့သူမြား
ဘောလုံးလောကအတွင်းမှာ ကလပ်အသင်းတွေနဲ့ အောင်မြင်မှုအကြီးအကျယ်ရရှိခဲ့တဲ့ ကစားသမားတွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကစားသမားတွေထဲကမှ တချို့ကတော့ လက်ရွေးစင်အသင်းမှာ ကလပ်အသင်းလိုခြေစွမ်းမျိုးကို မပြသနိုင်ခဲ့ဘဲ အောင်မြင်မှု နည်းပါးခဲ့ကြပါတယ်။ ကလပ်နဲ့ လက်ရွေးစင်အသင်းကြားက ကွာဟမှုတွေ၊…
ယူနိုကျတကျအသငျးမှာ သှငျးဂိုးတဈဂိုးသှငျးယူတိုငျးအပိုဆုကွေး ပေါငျ (၈၀၀၀) ရရှိနတေဲ့ အဂျဂါလို
ယူနိုက်တက်အသင်း ရဲ့ တိုက်စစ်မှူးသစ် အဂ်ဂါလိုကတော့ ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့အတူ သွင်းဂိုးတစ်ဂိုးသွင်းယူတိုင်း ပေါင် (၈၀၀၀) အပိုဆုကြေးရရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ယူနိုက်တက်အသင်းကို ဆောင်းရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာ ပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ အဂ်ဂါလိုကတော့ ရှန်ဟိုင်းရှန်ဟွာအသင်းမှာ…
အီဂါလိုကို အပွီးသတျချေါယူဖို့ ယူနိုကျတကျပရိသတျမြား အလိုရှိနေ
3 weeks ago Emyrus
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းပရိသတ်တွေဟာ အငှားနဲ့ခေါ်ယူထားတဲ့ တိုက်စစ်မှူးအီဂါလိုကို အပြီးသတ်ခေါ်ယူဖို့အတွက် တောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အီဂါလိုဟာ ရှန်ဟိုင်းရှန်ဟွာအသင်းကနေ ခြောက်လအငှားနဲ့ လာရောက်ကစားနေတာဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာ ခြေစွမ်းပြနေသူဖြစ်ပါတယ်။ ၀က်ဖို့ဒ်တိုက်စစ်မှူးဟောင်းကလည်း အိုးထရက်ဖို့ဒ်မှာ ဆက်လက်ကစားသွားဖို့ ဆန္ဒရှိနေပြီး…
ဘောလုံးလောကရဲ့ သမိုငျးသဈတဈခုရေးခဲ့သူ မကျဆီ
မက်ဆီ နဲ့ ရိုနယ်ဒိုဆိုတာ ဘောလုံးလောက တည်ရှိနေသရွေ့ကို ပြောစမှတ်တွင်နေမယ့် သမိုင်းတစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ကစားသမား (၂) ဦးပါ။ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ကစားသမား ဆုကို (၆) ကြိမ်ထိ…
ပီအကျဈဂြီရဲ့ ခနျြပီယံလိဂျအိပျမကျတှေ တကယျဖွဈလာတော့မလား?
သန်းကြွယ်သူဌေးတွေရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရှိခဲ့ပြီးချိန်ကစပြီး ပီအက်စ်ဂျီအသင်းရဲ့ ပစ်မှတ်က ဥရောပမှာပါ အောင်မြင်မှုတွေရရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့အနေနဲ့ ပြည်တွင်းမှာသာ ဗိုလ်ကျနိုင်ခဲ့ပြီး ဥရောပမှာတော့ တိုးမပေါက်ခဲ့ပါဘူး။ နှစ်တိုင်းလိုလိုမှာ ကစားသမားကောင်းတွေ ခေါ်ယူအားဖြည့်ခဲ့ပေမယ့်…
ဂှာဒီယိုလာက သူ့လေးစားမှုနဲ့ မထိုကျတနျဘူးလို့ ဖာနနျဒကျဈပွော
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်လူဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်က မန်စီးတီးနည်းပြဂွာဒီယိုလာဟာ သူ့ရဲ့လေးစားမှုနဲ့ထိုက်တန်သူမဟုတ်ခဲ့ဘူးလို့ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ မန်ချက်စတာဒါဘီပွဲမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့ရာမှာ ဖာနန်ဒက်စ်က အထက်ပါအတိုင်းထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်က ၂-၀ နဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာ…
Copyright © Sport Daily, Myanmar| All rights reserved. | Theme created by MOPS Myanmar .